Manjaro inogadzirira kumhara kwayo pamahwendefa eAroid ... uye iyo iPad? | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro inogadzirira kumhara kwayo pamahwendefa eAroid ... uye iyo iPad?
Ini pachangu, idzi nhau dzinoita sedzakakosha kwandiri. Asi, kune avo vako vakamirira chinyorwa chakazara, ndine urombo kukuudza kuti hazvizove zvakadaro, kwete ichi. Uye nderekuti timu yevanogadzira kuseri kweichi chakakurumbira kugovera kunoenderana neArch Linux yakavimbisa izvozvo Manjaro ichauya kune Android uye iOS mapiritsi. Kunyange chiri chokwadi kuti kumhara pane zvishandiso zveApple hachisi chinhu chitsva, Ubuntu Touch yakatozviita uye ichienderera nekuwedzera michina muOTA imwe neimwe nyowani, inokwezva zvakanyanya kune "mapiritsi eIOS".
Kubva pano, iyo yakasara yechinyorwa ichatarisana nezvakanyorwa nemutemo Manjaro account Twitter, chii chiri chifananidzo uye zvinyorwa zveiyo tweet. Tichitarisa pamufananidzo, tinogona kuona kuti zvavari kushandisa ndizvo GNOME desktop, kana zvakadaro zvinoita sekunge isu tikatarisa kumusoro kuruboshwe uko kunoti "Mabasa" uye pabhawa yepamusoro. Pazasi pemufananidzo isu tinoonawo mabhatani eiyo Android piritsi, asi isu hatigone kuvimbisa kuti yekupedzisira software ichava navo ipapo; inogona kunge iri kupa, sezvo kubata kwacho kuchisanganisira miganhu kana bezels kunze.
Manjaro pane iyo iPad?
Iyo tweet yakavhura bhokisi raPandora inotevera.
Kuuya manje manje: @ManjaroLinux ako #Android uye #iOS #mapiritsi ... pic.twitter.com/Ea3ykYQJWf
- Manjaro Linux (@ManjaroLinux) March 18, 2021
Sekushandisa kwemidziyo yakawanda, ini zvakare ndine iPad, uye isu vedu vane Apple piritsi vanoziva kuti mashandiro ayo akapihwa zita rekuti iPadOS. Naizvozvo, isu hatizive kana vanga vakanganisa, ivo vaida kutaura kudaro kana kana izvo zvavakagadzirira zvinongoshanda chete paPad iyo yaishandisa iOS, ndiko kuti, chimwe chinhu chekare. Kusvikira vapa rumwe ruzivo isu hatizomboziva kuti ndeipi iPad inotsigirwa.
Izvo zvavanofanirawo kutiudza, uye ini ndinoomerera paIpad nekuti zvakanyanya kuoma, ndomaitiro atichaita ekuisa iyo yekushandisa system paapuro piritsi. Pane sarudzo nhatu: imwe yaizoisa iyo system ine bhutsu mbiri, imwe yaizoiisa mundangariro kutsiva main system, uye imwe inogona kumhanyisa nekuwedzera pendrive inoenderana, asi ini ndinofarira kufunga zvakawanda nezve yekutanga. sarudzo. Muchokwadi, icho chinhu icho watoita pane iyo iPhone, kunyangwe kuisa Ubuntu.
Sekushandisa kwePineTab, ndinoda Manjaro kuitarisira zvishoma uye kuburitsa mifananidzo nguva zhinji neayo maPlasma kana Lomiri editions, asi hei, iyi imwe nyaya. Chatinoziva ndechekuti isu munguva pfupi inotevera tichakwanisa kushandisa ino pamahwendefa eAroid uye, zvirinani, mamwe maPads.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro inogadzirira kumhara kwayo pamahwendefa eAroid ... uye iyo iPad?
Alpenglow Rima richawanikwa paLinux kutanga neFirefox 88
Flent: yakakwana test kit yekuyedza network kubatana